ကုန်သွယ်ရေးမြှင့်တင်ဖို့ကြိုးပမ်းလာတဲ့ တောင်ကိုရီးယား- မြန်မာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ခြေလှမ်းတစ်လှမ်း | Commerce Journal
Home » စီးပွားရေးသတင်း, -ပြည်တွင်းစီးပွားရေး » ကုန်သွယ်ရေးမြှင့်တင်ဖို့ကြိုးပမ်းလာတဲ့ တောင်ကိုရီးယား- မြန်မာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ခြေလှမ်းတစ်လှမ်း » စီးပွားရေးသတင်း
Tue, 05/26/2015 - 20:42 -- journal_editor
ပွဲတွေကများလို့နားရတယ်မရှိအခုတလော အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွေ၊ နိုင်ငံ တကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ အစည်းအဝေးတွေ၊ ပုံမှန်ပြုလုပ်နေရတဲ့မြန်မာ့စီးပွားရေးဖိုရမ် (MBF-Myanmar Business Forum) တွေ နဲ့ နားရတယ် ဆိုတာမရှိသလောက်ပါပဲ။ အခုတစ်ပတ်ထဲမှာတင် ပြပွဲက နှစ်ပွဲ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲက နှစ်ခု၊ ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာက အကြိမ်ကြိမ်ပါပဲ။ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာတော့ တောင်ကိုရီးယားနဲ့ မြန်မာတို့ စီး ပွားရေး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုတွေ၊ ဆွေးနွေးပွဲတွေ၊ ကုန်စည်ပြပွဲတွေ၊ နှစ်နိုင်ငံယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်တဲ့ ပဒေသာ ကပွဲ တွေ စသည်ဖြင့် ကျင်းပခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။ကိုရီးယားကုန်စည်ပြပွဲအခုတစ်ပတ်ထဲမှာတော့ လူအများ စိတ်ဝင် တစားရှိနေကြပြီး လာရောက်လေ့လာကြည့်ရှုခဲ့ကြ တာကတော့မေလ ၂၁ရက်နေ့ကနေ ၂၄ ရက်နေ့ အထိ ရှင်စောပုလမ်းမှာရှိတဲ့Myanmar Event Park မှာ ကိုရီးယား ကုန်စည်ပြပွဲ ၂၀၁၅ (KoreaProduct Expo 2015-Yangon) ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီပြပွဲမှာ အခန်းပေါင်း ၈၈ ခန်း ပြသခဲ့ပြီး ကုန်စည်အမျိုးအစား ပေါင်း ၈၁ မျိုးပါဝင်ပြသခဲ့ ပါတယ်။ ပြပွဲကို ဖြစ်မြောက်အောင်စီစဉ် စုစည်း ပြသတာကတော့ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းနှင့်fh KoreaMyanmar Business Council ? MOTIE (Ministry of Trade, Investment and Electronics , KOTRA တို့ကကူညီထောက်ပံ့ပေး ခဲ့ပါတယ်။အဓိကပြသတာက တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ အနေနဲ့ ကိုရီးယားကုန်စည်ပြပွဲ ၂၀၁၅ မှာ ကုမ္ပဏီ ပေါင်း ၈၂ ခုက အုပ်စု ၇ စုခွဲပြီးပြသခဲ့တာကို တွေ့ ရပါတယ်။ အဲဒီအုပ်စု ၇ စုကတော့Electronics , Medical Equipment, Cosmetics and Beauty, LivingGoods, Korea Food, Auto Parts, Machinery and Tools, Construction and Interior တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ပြပွဲရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ပြပွဲတွေ မကြာခဏလာ ရောက်ပြသခဲ့သလို စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်း အမြဲ မပြတ် လာရောက်ပြီးလေ့လာလျက်ရှိနေတဲ့ အပြင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပိုင်းမှာလည်း လာရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလျှက်ရှိတာကို တွေ့နေရပါပြီ။ ကျင်းပပြီးစီးခဲ့တဲ့ ကိုရီးယားကုန်စည်ပြပွဲ ၂၀၁၅ ကို ကျင်းပရတဲ့အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ]]ကိုရီး ယား-မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ ကုန်သွယ် မှုနှင့် အပြန်အလှန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတတို့ ရှင်သန်စေ ဖို့}}ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာ-တောင်ကိုရီးယားကုန်သွယ်မှုတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကုန်သွယ်ဖက် နိုင်ငံများအနက် အဆင့် (၇) မှာ ရပ်တည်နေတဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ နဲ့ တောင်ကိုရီးယားတို့ရဲ့ ကုန်သွယ်မှု ပမာဏဟာ ၂၀၁၄-၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာသန်းပေါင်း ၈၃၀ ဒသမ ၆၆၉ သန်းရှိ ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ ဘဏ္ဍာနှစ်တွေက မြန်မာနဲ့ ကိုရီးယားတို့ရဲ့ ကုန်သွယ်မှုကို ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ၂၀၁၀-၁၁ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာကုန်သွယ်မှုပမာဏ အမေရိကန် ဒေါ်လာသန်းပေါင်း ၄၅၂ သန်း၊ ၂၀၁၁-၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း၆၆၆ သန်း၊ ၂၀၁၂-၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း ၆၂၃ သန်း၊ ၂၀၁၃-၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း ၁၅၇၀ သန်းအထိ မြင့်တက်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၄-၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာတော့ အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်းပေါင်း ၈၃၀ ကျော်ရှိခဲ့တာကို တွေ့မြင်ခဲ့ရ ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက ထွက်ကုန်တွေကို တင်ပို့ရာ မှာတော့ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာ အဓိက တင်ပို့ တဲ့ ၁၀ နိုင်ငံထဲမှာ ပါဝင်လာပြီးအဆင့် (၆) နေရာ မှာ ရှိနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုရီးယား နိုင်ငံကနေ မြန်မာနိုင်ငံသို့ တင်သွင်းလာတဲ့ နိုင်ငံ အလိုက်ကြည့်ရင်တော့ အဆင့် (၉) နေရာမှာ ရှိနေတာကို တွေ့ရ ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အဓိကပို့ကုန်မြန်မာနိုင်ငံကနေ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ သို့ အဓိကတင်ပို့တဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေကတော့ အသင့်ချုပ်ပြီးသား အထည်၊ ရေထွက်နဲ့လယ်ယာ ထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၄-၁၅ ပို့ကုန်စာရင်းဇယားတွေအရ အသင့်ချုပ်ပြီး အထည်တင်ပို့မှုမှာအမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂၇၂ သန်းဖိုး၊ ငါးတင်ပို့မှုမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃ ဒသမ ၅၃ သန်းကျော်ဖိုး၊ ပဲတီစိမ်းတင်ပို့မှုမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၈ သန်း ကျော်ဖိုး၊ ပဲလွန်းဖြူတင်ပို့မှုမှာ အမေရိ ကန်ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၅ သန်းကျော်ဖိုး၊ နှမ်းတင်ပို့မှုမှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ သုည ဒသမ ၆ သန်းကျော်ဖိုး၊ စွန်တာနီ၊ စွန်တာပြာ၊ သီဟိုဠ်စေ့တို့က အမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်သန်းကျော်ဖိုး၊ ပုဇွန်တင်ပို့မှုမှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ သုည ဒသမ ၃ သန်းကျော်ဖိုးတင်ပို့ထား တာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာထုတ်ကုန်တွေ တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံကို ထိုးဖောက်တင်ပို့နိုင်ဖို့အတွက် တိုးတက် ဆောင်ရွက်ဖို့ လိုအပ်နေတာကတော့အမှန်ပါပဲ။ မြန်မာ့ကုန်ပစ္စည်းများ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကို တင်ပို့နိုင်မှုအခြေအနေများကို လေ့လာကြည့်ပါ က ၂၀၁၀-၁၁ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ အမေ ရိကန်ဒေါ်လာ ၁၄၈ သန်းကျော်၊ ၂၀၁၁-၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂၁၄ သန်းကျော်၊ ၂၀၁၂-၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၁၈ သန်း ခန့်၊ ၂၀၁၃-၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ် မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၅၃ သန်း ကျော်ဖိုးနဲ့၂၀၁၄-၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၄၁ သန်းကျော်ဖိုး တင်ပို့ ထားခဲ့ပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပို့ကုန်တင်ပို့တဲ့ အဓိကနိုင်ငံတွေအနက် အဆင့် (၆) မှာ ရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့်အမယ်သစ် ပို့ကုန် တွေ တိုးချဲ့တင်ပို့နိုင်ဖို့၊ ဈေးကွက်ဝေစု ပိုမိုရရှိစေဖို့ အတွက် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက အင်တိုက်အားတိုက် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသို့ တင်သွင်းမှုတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ ထွက်ရှိတဲ့ ထုတ်ကုန် ပစ္စည်းတွေအနက် မြန်မာနိုင်ငံကို တင်သွင်းတဲ့ အဓိကကုန်စည် ၁၀ မျိုးကိုလည်းလေ့လာမိခဲ့ပါ တယ်။ တောင်ကိုရီးယားကနေ မြန်မာနိုင်ငံကို အဓိက တင်သွင်းလာတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေရဲ့ တန်ဖိုး ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် ၂၀၁၄-၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ စက်နှင့်စက်အပိုပစ္စည်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁၁၀ ဖိုး၊ပလပ်စတစ်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း အမေရိ ကန်ဒေါ်လာ ၄၅ သန်းဖိုး၊ ယာဉ်နှင့် ယာဉ်အပို ပစ္စည်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၆ သန်းဖိုး၊လယ်ယာ သုံး ထွန်စက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၁သန်းဖိုး၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်း (သံနှင့်သံမဏိ)အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၂ သန်းဖိုး၊ ဆေးနှင့်ဆေး ပစ္စည်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၄ သန်းဖိုးခန့် ၊ လျှပ်စစ်သုံးပစ္စည်းအမေရိကန်ဒေါ် လာ ၁၄ သန်း ဖိုး၊ ဓာတုဗေဒချည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀ သန်း ဖိုး၊ သားရေနှင့် သားရေတုပစ္စည်းအမေရိကန် ဒေါ်လာ ၇ သန်းဖိုးနှင့် ဓာတုဗေဒထုတ်ကုန် အမေ ရိကန်ဒေါ်လာ ၈ သန်းကျော်ဖိုး တင်သွင်းခဲ့ပါ တယ်။စုစုပေါင်းသွင်းကုန်ပမာဏဟာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း ၄၉၀ သန်းဖိုး ရှိတာကိုတွေ့ရ ပါတယ်။ ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက်ကုန်ပစ္စည်းတင် သွင်းမှုကတော့ ၂၀၁၀-၁၁ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ အမေရိ ကန်ဒေါ်လာ ၃၀၄ သန်း၊ ၂၀၁၁-၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာအမေရိကန် ဒေါ်လာ ၄၅၂ သန်း၊ ၂၀၁၂-၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၂၁၈ သန်း၊ ၂၀၁၄-၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၉၀ သန်းဖိုးရှိ တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲများ
ကုန်စည်ပြပွဲနဲ့အတူNovotel Yangon Max Hotel မှာ ကိုရီးယား-မြန်မာ စီးပွားရေးဖိုရမ် ကိုလည်း ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီစီးပွားရေး ဖိုရမ်ကို စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းမြင့်၊ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးမြင့်လှိုင်နှင့် ဌာနဆိုင်ရာအရာရှိများ၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနှင့် စက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း ဥက္ကဋ္ဌနှင့်တာဝန်ရှိသူများ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ KOTRA ဥက္ကဋ္ဌ၊Mr.Kom-Jae-Hong၊ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေး၊ စက်မှုနှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး Mr.Lee Woon-Ho၊ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံ သံ အမတ်ကြီးနှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ မြန်မာနှင့် ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့မှစီးပွားရေးပညာရှင်များ၊ လုပ်ငန်းရှင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပါ တယ်။
ဆွေးနွေးပွဲမှာ Expansion of Economic Cooperation Between Korea and Myanmar (Myantra စီမံကိန်းပါဝင်)ခေါင်းစဉ်ဖြင့် KOTRA မှ Executive Vice President ဖြစ်သူ Mr.Yam Won - Sok က လည်းကောင်း၊ Policy andIntensification Strategy for Promotion Foreign Trade in Myanmar NES ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ကုန်သွယ် မှု မြှင့်တင်ရေးနှင့်စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးလှမော်ဦးကလည်းကောင်း၊ ASEAN Economic Community andMyanmar: Opportunities and Challenges ခေါင်းစဉ်ဖြင့် KIEP မှ Head of South East Asia and Oceania Team မှDr.Oh Yoon-Ah ကလည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတော် သမ္မတ၏ စီးပွားရေးရာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် ဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်ကEconomic Development of Myanmar and Role of Foreign Direct Investment ခေါင်းစဉ်ဖြင့်လည်း ကောင်း ဒဂုံအင်တာနေရှင်နယ်မှ ဦးသူရိန်အောင် ကSEZ:Development Plans of Myanmar and Opportunities for KoreaInvestors ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊KIET rS Senior Research Fellow ဖြစ်သူDr. Shim Young-Seop က EconomyVitalizing Investment ခေါင်းစဉ် ဖြင့်လည်းကောင်း အသီးသီးတင်ပြဆွေး နွေးခဲ့ကြပါတယ်။အဖြေထုတ်ခဲ့တာကဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့ အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ် တွေအပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့ မြန်မာကုန်သွယ်မှု နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြှင့်တင်ရေးအတွက် အဖြေထုတ် ဆွေးနွေးပြီး အဆုံးသတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အနာဂတ်အတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာဖို့အတွက် လိုအပ်ချက်တွေ ဖြည့်ဆည်းဖို့ လိုသလိုပြင်ဆင်စရာရှိတာတွေကိုလည်း ပြင်ဆင် ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို စဉ်ဆက် မပြတ်ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်မှုတွေကြောင့် အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ စီးပွားရေးအလားအလာဟာ လှပလာမှာက တော့ အသေအချာပါပဲ။